ऊर्जा क्षेत्रमा कुनमा कति छुट्याइयो... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
ऊर्जा क्षेत्रमा कुनमा कति छुट्याइयो बजेट?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने बताएका हुन्।
यस्तै, विद्युत निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई निजी प्रणालीमा आधारित अर्ध जलासययुक्त र जलासययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गर्ने भएको छ।
दुधकोसी जलासययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरू गर्ने भएको छ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, कर्णाली, तामाकोसी ५, चयनपुर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने छ।
बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नाइगाढ, उत्तर गंगा, आधिखोला लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाउने छ।
झापाको अनारमुनिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म लप्सिफेंदी रातामाटे, हेटौंडा, लप्सिफेंदी रातमाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाउने भएको छ।
बुटवल, गोरखपुर, लम्केबरेली र गल्छी केरुङ खण्डको निर्माण सुरू गर्ने भएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ।
दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गर्ने भएको छ। प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचका सबै घरमा आगामी वर्ष र प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी २ वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने छ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागत ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका ९७ स्थानीय तहमा २ सय वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीयकरण गर्ने भएको छ।
तराई मधेसमा जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्यास जडान गर्ने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुर्नसंरचना हुने भएको छ। उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कार्य छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । काठमाडौंबाट सुरू भएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला सहरमा विस्तार गर्ने भएको छ।
विद्युत विकासको अनुमति नलिई लामो समयसम्म आयोजना विकासको कार्य सुरू नगर्नेहरूको आयोजनाको इजाजत पत्र रद्द गरिने भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १५, २०७७, १८:४८:००
काठमाडौंमा संक्रमण बढेको बेला हतारोमा सार्वजनिक सवारी खुला
लगातारको वर्षाले विद्युत उत्पादन प्रभावित, ५ सय मेगावाट उत्पादन बन्द भयो
२०१९ सम्मको लाइसेन्स छपाई सकियो
उड्डयनमा संस्थागत सुधार गर्न एडिबीको ५ अर्ब ९५ करोड ऋण
बुटवलको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान खारेज हुने अवस्थामा
पृथ्वी राजमार्गमा खुल्यो चार्जिङ स्टेशन, सञ्चालक भन्छन्- सरकारले बिजुली गाडीको फाइदा बुझेन